Madaxweyne Guuleed “Labo Maamul Kama Wada Talineyso Magaalada Gaalkacyo” – Goobjoog News
Madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa dib ugu laabtay magaalada Cadaado ee xarunta maamulkiisa kadib safar shaqo oo uu ku joogay magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha Galmudug MR. Guuleed ayaa sheegay in Maraykanka ay kala hadleen duqeyntiisa iyo bixinta magta ciidamadii daraawiisha Galmudug ee halkaas ku dhintay islamarkaana ay wada heshiiyeen.
Hadalkani ka soo yeeray madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa ku soo aadaya iyadoo maalintii labaad magaalada Gaalkacyo galbeedkeeda Koonfureed uu ka dhacay dagaal u dhaxeeya ciidamo kala taabacsan maamullada deriska ah ee Galmudug iyo Puntland.
Maamulka degmada Wanlaweyn oo sheegay in gaba gaba uu marayo howlgalka ka dhanka ah Isbaarooyinka (Dhageyso)